रात परेपछि मलाई किन से’क्स चाहना बढी हुन्छ? – Enepali Samchar
December 11, 2020 adminLeaveaComment on रात परेपछि मलाई किन से’क्स चाहना बढी हुन्छ?
enepalisamchae काठमाडौँ। हँसिली र स्टाइलिस कपडामा सजिएकी सन्ध्याले आफ्नो उमेर ४० वर्ष पुगेको बताउँदा पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।‘तपाईं मुस्किलले ३० वर्षकी देखिनु हुन्छ । यसको रहस्य के हो ?’ सन्ध्याको उत्तर थियो, ‘प्रेमी छैन, श्रीमान् छैन, परिवार छैन र तनाव पनि छैन ।’ सन्ध्या बंसल एक नामी कम्पनीमा मार्केटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्छिन् । उनी दिल्ली एनसीआरमा फ्ल्याट लिएर एक्लै बस्छिन् । उनी
थालेका थिए । मलाई भने त्यसमा कुनै चासो थिएन ।’ उनलाई पुरुष मन पर्दैन भन्ने पनि होइन ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेला मलाई एक पुरुष ज्यादै मनपथ्र्यो । मलाई उनीसँग समय बिताउन रमाइलो लाग्थ्यो । समय सँगै बिताउँदै जाँदा उसको मनोबल उच्च हुँदै थियो, जुन सामान्य थियो । तर जब कुरो यौ’नसम्म पुग्यो, मलाई निकै असहज लाग्यो । मलाई यस्तो लाग्यो मेरो शरीरले यौ नलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । मलाई यौ नको जरुरी नै थिएन ।’’सन्ध्या यौ नबाट तर्सिन्न थिइन् ।
र यो पनि : जान्नुहोस् बदाम दुधका अचुक फाइदा…
के तपाइलाइ थाहा छ ? कसरी गर्छन महिलाहरुले हस्तमैथु’न यसरि गर्छन (भिडियो हेर्नुस )